Madaxweyne Farmaajo oo ka soo duulay magaalada Garoowe kadib markii lagu kala tagay shirkii madaxda Soomaalida. | STN Somali
Home Wararka Madaxweyne Farmaajo oo ka soo duulay magaalada Garoowe kadib markii lagu kala...
Madaxweyne Farmaajo oo ka soo duulay magaalada Garoowe kadib markii lagu kala tagay shirkii madaxda Soomaalida.
Madaxweynaha dalka Maxamed C/llaahi Maxamed (Farmaajo), ayaa manata ka soo dhoofay magaalada Garoowe oo uu ku sugnaa Sagaalkii maalin ee u danbeysay, halkaas oo uu natiijo la’aan ku soo idlaaday shirkii madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada.
Madaxweynaha maamulka Puntland Siciid C/llaahi Deni, Kuxigeenkiisa Axmed Cismaan Karaash iyo Saraakiil kale, ayaa wafdiga madaxweyne Farmaajo ka soo sagootiyay garoonka diyaaradaha Jen. Haamaan ee magaalada Garoowe.
Madaxweynaha iyo xubnaha la socda oo Wasiiro iyo Xildhibaano isugu jira, ayaa ku soo jeeda magaalada Muqdisho oo uu ka maqnaa Aqalkiisa madaxtooyada labadii todobaad ee u danbeysay.
Ma jirin wax hadal ah oo madaxweynaha iyo wafdigiisa ay Warbaahinta ku siiyeen Garoowe intii ay ka soo dhoofayeen magaalada, taasoo daliil u ah fashilka ka dhashay wadahadaladii diirada lagu saarayay arrimaha Amaanka, doorashooyinka, dastuurka iyo xal u helista khialaafaadka madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada.
Waxyaabaha keenay natiijo la’aanta shirka waxaa qeyb ka ah buuqii ka dhashay mudada xil heynta madaxweynaha Galmudug oo Villa Somaliya ay qabtay iney ku egtahay bisha 7-aad ee sanadkan, halka Xaaf uu rumeysnaa in xil heyntiisa ay ka bilaabaneyso markii la mideeyay maamulka Galmudug iyo Ahlu-Suna, waxaa kaloo shirka buuq ku furay rabashaidhii Khamiistii ka dhacay garoonka Kismaayo, xiligaas oo uu ka degay C/Naasir Seeraar Maax oo hore uga mid ahaa dadkii ugu dhowaa madaxweynaha Jubaland.
Axmed Madoobe markii uu shalay tagay Kismaayo waxa uu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu mar kasta dalbanayay markii qodob is fahan laga gaari rababa in fursad loo siiyo inuu cid kale la tashiyo la soo sameeyo, iyadoo hoggaamiyaha Jubaland is weydiiyay cida lala soo tashanayo maadaama Ra’iisul Wasaare Khayre iyo madaxdii maamul goboleedyada ay shirka xaadir ku ahaayeen.
Garoowe waxaa haatan ku sugan oo kaliya madaxweyaha Koofur Galbeed, iyadoo sidoo kale uu isla galabta ka soo dhoofay madaxweynaha Hirshabelle, halka madaxweynayaasha Jubaland, Galmudug, Ra’iisul Wasaaraha dallka iyo Duqa Muqdisho ay shalaydii hore isaga duuleen magaalada.
Previous articleIn ka badan 30 Kun Arday oo maanta u fariisinaysa Imtixaanka Shahaadiga Dugsiga Sare
Next articleFaah Faahin Kasoo baxaysa Qaraxii ismiidaaminta ee lagu weeraray Xarunta degmada Wardhiigley